Hattuu fi Gantuu Irraa Dhugaan Hin Eegamu! -
Qixxeessaa Lammii | Onkoloolessa 31, 2017
Jiruu fi Jireenya dhala namaa keessatti wal dhabbii fi walii galteen ta’iinsa jiru. Wal dhabbiin dhalatu karaa lama lolaa fi nagayaan furama. Furmaatni lolaan argamu wal dhabbii lolaan dhufe. Wal dhabbiin akkasii yeroon karaa nagayaa haasawaan furmaata argatus ni jira.Qaamni wal dhabe araaramuuf fedha guutuu wal fakkaatu yoo qabaate araarri bu’u waaraa ta’a. Fedhii gama tokkoo qofaan yoo ta’e ammoo nageenyi bu’u rarraa’aa dha. Wal dhabbii dhalate karaa nagayaan furachuu irra falli caalu garuu hin jiru. Hamma araarri hin bu’initti qaamni wal dhabe kan wal abaaru malee kan wal eebbisu, Kan wal tuffatu malee kan wal jaju, kan wal jibbisiisu malee kan wal jaalchiisu tasa hin jiru. Ololli amma ABO fi hoogganoota isaa irratti bal’inaan deemaa jirus haala olitti tuqaman kanaan adda miti.
Waan ololamu gurra dhagahu hafnaan qaamni ololuu deebi’ee of caqasuu osoo danda’ee nama jibbisiisa. Qaama jibban dhadhaa/damma hin muudan. Waan bara mootummaa ceehumsaa booda mootummaan Tigree ABO irratti goote yaadachuun ni ga’a. ABOn nama nyaata, qala, guba, hallayyatti guura, dhaaba hamaa dhala namaaf gara nyaattoo hin qabne kkf waan hin jetne hin qabu. Sagalee fi suuraanis wal qabsiisee dhugaa waakkachuu hin danda’amne godhee ija ummataa duratti gadi baasee ummata Oromoo ittiin boochisiisaa ture. Dhugaan yoomiyyuu dhuguma! Bakkuma ofii jirti. Suuta suutaan ummatni Oromoo olola dhaaba isaanii irratti deemsifamaa turame sana duraa duuba gara gaggalchee ilaale. Dhuma irratti dhara dhugaan keessa hin jirre bokoksanii akka oofan bare. ABOn sababa ummata isaaf akka jibbamee fi akka diinaatti akka inni dhala Oromoo biratti ilaalamu ta’e jedhamee diraamaa mootummaadhaan irratti qindaawee gadi dhiifame ta’uun irra gahame.
ABOn akka irratti ololame sana dhaaba hamaa osoo ta’ee har’a ummata bal’aa Oromoo walii galaan inni nu bulchuu qaba jedhamee mootummaa nama nyaataa duratti bahamee dirra bahatti hin dubbatamu ture. Dhaabicha haqaa kan diinni guddichi ummata keenya ganna 27 oliif cafaqee miidhaa ture hin balleessin hattuu fi gantuun balleessuu fi yaaluun garba Hindiitti fincaanuu dha. Gantuun alaan’aluun amaluma isiin qabdu. Gocha hamatu hooggana dhaaba kanaatiin narratti raawwatame jedhanii yoo dubbatan waan kaayyoo sana irratti balleessanis duukaa himachutu irra ture. Yakka malee namni nama ta’ee nama isaatti roorrisu hin jiru. Jiraatus lubbuu jiraatu itti gaafatama seenaa fi seeraa jalaa ba’uu hin danda’u. Kan ajjeessee fi ajjeefames du’a irraa hafuu hin danda’an.
Du’a nama irraa hin oolamneen dafanii wal keessummeessuun dhaaba kana keessatti ni jira jedhanii ololuun qofti dhugaa baasuu hin ta’u. Dhaaba Oromoof bara dheeraa falmachaa ture irra dhaaba alagaa aanfatuudhaan afaan guuttatanii dhaadhessuun mataan isaa ergaa of danda’e qaba. Nama lubbuun jiru du’e, nama hin hidhamin hidhame, nama hin ari’amin ari’ame, nama hin roorrifamin roorrifame jedhamee maqaa dhaaba kanaa balleessuuf qofa namoota qindeessanii namootni fuula face book irratti ummata Oromoon jeeqan dura eenyummaan isaanii beekkamuu male. Hoogganni dhaabaa badii qabaatu gaafatama isaan itti gaafatamuuf jiraata. Sababnummaan hoogganni dhaaba kanaa balaaleffatamaa oolamuuf maaliif?
Gaaffii kanaaf deebii kan kennu namoota hooggana qaamaa fi hojiidhaan waliin hojjatee beeku duwwaadha. Bira jiraatee ragaa badii kanaa mirkaneessuu miseensi danda’u yoo jiraate bareeda. Dhaaba keessaa ganan maaf abaaran, balaalleffatan jedhanii aaruun ammoo hin barbaachisu. Xurii ofii qaban itti dursanii itti haqachuuf. Seenaan namuufuu galmaawaa jira. Ummata Oromoo gandaan, amantaan, ilaalchaan adda qooduuf ololli dabaa dhaaba kana irratti deemsifamaa hin jirre hin jiru. Namootni gandummaadhaan dhaaba keessaa dhiibamnee darbamne jedhanii sab-himaalee hawaasaa gara garaa irratti yaa’anii lallaban cufti dura gaafa qabsoo sabaatiif gadi ba’an gosa isaaniitiin mari’ataniitii? Gosatu itti bahee qalee maree eebbisee nuu duulii nu bilisoomsi jedhee dirree qabsootti isaan ergatee?
Gosootni namoota badii dalaganii maqaa keessaniif dhaaba keessaa dhiibamne jedhanii dubbiin itti galan dhugaa qabu jechuudhaan akkamitti maxxanfatanii faana fiigu? Kunis waan ilaallatamuu qabu? Dhugaa fi dhara qaama himatamu sana dubbisanii irraa adda baafachuun dhugaan eessaa akka jirtu dharti eessa akka jirtu adda baafachuuf nama gargaara. Tarkaanfii itti aanutti tarkaanfachuun achi booda yoo ta’e irra tola. Kanaaf, gantuu fi hattuun yeroo kamuu hin amanamtu, dhugaanis irraa hin eegamu waan ta’eef dhalli Oromoo cufti olola hooggana ABO irratti bal’inaan alaa fi keessaan deemsifamaa jiramu kana jala gurra akka hin qabanne jedha.
Olotoota, gantootaa fi hattootaanis boru ni gaabbituu adabadhaa jedhaan!